पाकिस्तानी क्रिकेटरको नयाँ वर्गीकरण सार्वजनिक, कुन खेलाडीको कति तलब ? - Everest Dainik - News from Nepal
पाकिस्तानी क्रिकेटरको नयाँ वर्गीकरण सार्वजनिक, कुन खेलाडीको कति तलब ?
काठमाडौं । पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड- पीसीबीले पाकिस्तानका क्रिकेट खेलाडीहरूको वर्गीकरण गरेको छ ।
बोर्डले राष्ट्रिय टोलीका खेलाडीहरूलाई ए, बी र सी वर्गमा विभाजित गर्दै उनीहरूको वर्गीकरण गरेको हो ।
यस अन्तर्गत वर्ग ए अन्तर्गत बाबर आजम, सरफराज अहमद र यासिर शाह रहेका छन् ।
त्यस्तै वर्ग बी अन्तर्गत असद शफिक, अजहर अलि, हरिस सोहेल, इमाम उल हक, मोहम्मद अब्बास, शदाब खान, शाहीं शाह र वहाव रियाज रहेका छन् ।
त्यस्तै वर्ग सीमा पर्ने खेलाडीहरूमा आबिद अली, हसन अली, फखर जमान, इमाद वासीम, मोहम्मद आमिर, मोहम्मद रिजवान, शास मसूद र उस्मान सिनवार रहेका छन् ।
याे पनि पढ्नुस टी–२० सिरिजः बंगलादेशी टिम १० हजार प्रहरीको सुरक्षामा पाकिस्तानसँग खेल्दै
यस वर्गीकरंमा मोहम्मद हफीज र सोयब मलिकलाई भने हाललाई कुनै पनि वर्गमा राखिएको छैन तर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्डले उनीहरू भविष्यमा पाकिस्तानी टीमको हिस्सा बन्न सक्ने सम्भावना रहेको स्पष्टीकरण दिएको छ।
पीसीबीले गतवर्ष ३३ खेलाडीहरूलाई पाँच वर्गमा वर्गीकरण गरेको थियो । यसपाली भने साबिकका पाँच वर्गहरूलाई तीनमा झारिएको छ भने खेलाडीको संख्या पनि १९ मा सीमित गरिएको छ ।
वर्गीकृत खेलाडीहरूको संख्या कम गरिए पानी उनीहरूको पारिश्रमिकमा उल्लेख्य वृद्धि गरिएको छ ।
याे पनि पढ्नुस प्रधानमन्त्री इमरान खानको दाबीः ‘पाकिस्तान बन्छ, दुनियाको बलियो टिम’
‘ए’ वर्गमा परेका छ खेलाडीमध्ये बाबर आजम, सरफराज आजम र यासिर शाहले मात्र आफ्नो पछिल्लो वर्षको स्थान सुरक्षित गर्न सकेका छन् भने अजहर अलीलाई ‘बी’ वर्गमा झारिएको छ ।
कुन खेलाडीको कति तलब?
क्याटोगरी ‘ए’ मा रहेका यी तीन जना खेलाडीले मासिक १.१ मिलियन पाकिस्तानी रुपैयाँ पाउने छन् ।
त्यस्तै, क्याटोगरी ‘बी’ मा असद शफिक, अजर अली, हरिस सोहइल, इमाम उल हक, मोहम्मद अब्बास, शादब खान, शाहिन शाह अफ्रिदी र वाहब रियाज गरी ८ जना खेलाडी रहेका छन् । यो क्याटोगरीमा पर्ने खेलाडीले मासिकरुपमा ७ लाख ५० हजार पारिश्रमिक पाउने छन् ।
याे पनि पढ्नुस हरिस रौफ पहिलोपटक पाकिस्तानी टोलीमा
त्यस्तै, क्याटोगरी ‘सी’ मा पनि ८ खेलाडी रहेका छन् । जसमा अबिद अली, हसन अली, फखर जमान, इमाद वासिम, मोहम्मद अमिर, मोहम्मद रिजवान, शान मसोद र उसन शिनवारी रहेका छन् । यो क्याटोगरीमा पर्ने खेलाडीले पाँच लाख ५० हजार मासिक रुपमा नगद पारिश्रमिक पाउने छन् ।
ट्याग्स: Sohaib Malik, पाकिस्तान क्रिकेट टिम